Soo Iibso Dhammaan Dawooyinka Xanuun-joojiyeyaasha caanka ah ee aan Daawada qorin [Visa, Master, PayPal & Wire]
Waxaan helnay 5 alaabta aad heli karto
Qiimaha: hoose ilaa sare
Qiimaha: sare ilaa hoose
Jooji sigaar cabidda (2)
Miisaanka oo luma (2)
Waa maxay xanuun?
Xanuunku waa dareen aanu qofna rabin inuu la kulmo. Xanuunku muhiim ayuu u yahay daboolka noolaha si aan awood ugu siino la macaamilida deegaankeena, laakiin waxaa jira nooc xanuun ah oo ay tahay inaan la kulmin. Nooca ugu xun ee xanuunka waa nooca ay adag tahay in laga takhaluso, ama haddii si kale loo dhigo, xanuun joogto ah. Xanuunka daba-dheeraada wuxuu saameyn ku yeelan karaa dhammaan qaybaha nolosha dadka waxayna ka dhigeysaa mid adag in la ilaaliyo qaab nololeedkiisa caadiga ah.
Qaar ka mid ah daawooyinka ugu badan ee la qaato waa xanuun baab'iyayaal kuwaas oo loo isticmaalo inay ku jiraan xaalado xanuun oo fudud iyo kuwa daba dheeraada. Waxaa loo isticmaali karaa si looga takhaluso jir xanuun iyo madax xanuun, dhabar xanuun iyo murqo xanuun iyo sidoo kale xanuun daran oo ka dhalan kara jirro sida kansarka ama qalliinka ka dib.
Maareynta xanuunka: xanuun baabi’iyeyaasha xanuunka
Uma baahnid inaad la noolaatid xanuunka maalin kasta. Waxaa jira wax aad sameyn kartid si aad uhesho xanuunka xanuunka ee aad uqalanto; waana mid ku habboon farahaaga. Hada waxaad kaheli kartaa dawooyinka xanuunka xanuunka kuu qoro qadka.
Xanuun baabiyeyaasha waxaa loo isticmaalaa in lagu xakameeyo xanuunka. Waxaad u baahan tahay inaad u qaadato daawada xanuun joojinta sida lagugula taliyay si ay u shaqeyso. Haddii aadan u qaadan sida ay u qoran tahay, markaa waxaa laga yaabaa inaysan waxtar u yeelan sidii ay ahaan lahayd haddii aad u isticmaasho sida lagu faray.
Noocee ah xanuun joojiyaha ayaa jira?
Xanuun joojiyeyaashu waa daawooyin si ballaaran loo isticmaalo si loo xakameeyo loona xakameeyo xanuunka noocyadiisa kala duwan, ha noqdaan kuwo khafiif ah, daran ama xanuun daba dheeraada. Waxaa lagu heli karaa noocyo iyo qaabab fara badan, sida lagu calaamadeeyay iyo sidoo kale noocyo jaanis ah, sida loogu qoray iyo sidoo kale daawooyinka miiska lagaa iibsado. Waxay kuxirantahay nooca iyo awooda iyo sidoo kale baahida bukaanka, waxaa loogu maamuli karaa sida kaniiniyada ama kaabsulka, hadal ahaan dareere ahaan, sida codsiyada jirka la mariyo sida kareemada ama boomaatada, ama irbado xidid si toos ah loogu aado dhiiga. Xaalad kasta, waa in loo qaataa sida saxda ah ee dhakhtar u qoray si looga hortago isticmaalka maandooriyaha, rafcaan toos ah iyo talo soo jeedin ka socota Machadka Qaranka ee Ku Xadgudubka Daroogada.
Si loo fahmo sida loo isticmaalo xanuun baabi'iyeyaasha kala duwan si loo yareeyo xanuunka waa inuu fahmaa daawooyinka laftooda. Waxaa jira laba nooc oo aasaasi ah oo ah xanuun baabi'iye, maandooriye iyo maandooriye. In kasta oo maandooriyeyaashu ay u muuqdaan kuwa dilaaya xanuunka oo xoog badan, halka kuwa xanuun joojiyayaasha aan maandooriyaha ahayn badanaa loo isticmaalo iyadoo qaarkood laga heli karo miiska. Waa kuwan noocyada kala duwan ee xanuun joojiyaha:
NSAID (Dawooyinka anti-bararka ee non-steroidal)
Dawooyinka anti-bararka ee non-steroid-ka waa mid ka mid ah noocyada ugu badan ee xanuunka dilaa. Kuwaas oo loo kala saaray inay yihiin kuwa aan maandooriye ahayn, xanuun baabi’iyeyaashani waxay labaduba xanuunka yareeyaan, waxay yareeyaan xanaaqa iyo bararka sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu yareeyo qandhooyinka. Waxay u shaqeeyaan sida 'acetaminophen' siyaabo badan laakiin way ka khatar badan yihiin maxaa yeelay waxay u horseedi karaan waxyeelo daran sida wadno qabad iyo dhiig-baxa caloosha haddii aan si habboon loo qaadan. Magacyada caanka ah ee calankan ku hoos qoran waa dawooyinka sida asbiriin. Daawooyinka aan anti-steroid-ka ahayn ee ka hortagga bararka ayaa leh saameyn weyn, oo ah inay khafiifiyaan dhiigga. Tani waxay sababi kartaa arrimaha xinjirowga iyo dhibaatooyinka kuwa laga yaabo inay qabaan cadaadis dhiig oo hooseeya oo qalliin galaya. Inta badan dadka isu diyaarinaya inay galaan qalliin waxaa lagu amrayaa inaysan qaadan nooc kasta oo NSAID ah toddobaadyo ka hor qalliinka ka hor si markaas dhiiggu dib isugu soo ururo.
Kooxdaan ku saleysan paracetamol ee xanuun joojiye badanaa waxaa lagu calaamadeeyaa Tylenol. Isku darka kale ee xanuun joojiyeyaasha waxaa ka mid ah paracetamol iyo codeine loo yaqaan Co-codamol, iyo paracetamol iyo dihydocodeine oo loo yaqaan Paracodol.
Acetaminophen wuxuu u shaqeeyaa sida saxda ah NSAIDs, wuxuu u shaqeeyaa sida xanuun baabi'iye iyo hoos u dhigista qandhada. Farqiga ugu weyn ee udhaxeeya ayaa ah in acetaminophen uusan u shaqeyneynin sida anti-bararka, ama uusan u khafiifin dhiigga sida NSAIDS.
Acetaminophen ma qaadan karaan dadka cabba khamriga ama qof kasta oo qaba cudurka beerka. Noocan xanuun baabi’iyaha ah ayaa aad ugu adkaan kara beerka, isaga oo dhaawici kara haddii uusan si wanaagsan u shaqeynaynin. Waxaa lagugula talinayaa in haddii aad wax ka badan laba cabtid maalintii aad la tashato dhakhtar ka hor intaadan qaadin noocan oo kale ah kan kaar-xanuun joojiyaha ah. Acetaminophen waxaa badanaa laga helaa inta badan daawooyinka miiska lagaa iibsado.
Kuwani waa kuwa ugu xanuunka badan ee xanuun baab'iyaha ee dhakhaatiirtu qori karaan. Badanka dawooyinka xanuunka joojiya ee maandooriyaha waxay si toos ah u saameeyaan maskaxda iyo nidaamka neerfaha ee neerfaha, waana in loo adeegsadaa kaliya warqad dhakhtar ama kormeer. Waxaa jira seddex nooc oo aasaasi ah oo ah xanuun joojiyayaasha maandooriyaha;
• Dabiiciyeyaasha Maandooriyeyaasha Dabiiciga ah ee dabiiciga ah - kuwani waa nooc ka mid ah xanuun baab’iyayaal oo si toos ah looga sameeyo opium, waxaana ku jiri kara morphine iyo codeine. Kuwani waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa daawo qalliin kadib.
• Semi-synthetic Narcotic Painkillers - kuwani waa xanuun baab'iyeyaal oo qayb ahaan dabiici ah qaybna nin sameeyay, oo ay kujiraan kiimikooyin kale oo kaladuwan kana kooban cunsuriyada dabiiciga ah. Kuwaas waxaa ka mid noqon kara oxycodone, hydrocodone iyo heroin.
• Dawooyinka Xanuunka Daroogada ah ee loo yaqaan 'Synthetic Narcotic Painkillers' - oo gabi ahaanba la sameeyo synthetic opioids waxaana ku jiri kara daawooyinka Fentanyl iyo Sufentanil Kala soocyadan ayaa sidoo kale ku jira liis dheer oo ka mid ah waxyaabaha ka soo baxa.
Dawooyinka xanuun baabi'iyaha waxay u janjeeraan inay caadeystaan ​​sameynta, bukaanada iyaga ku jira waxaa si dhow ula socon doona dhaqtarkooda. Iyada oo ku xadgudubka daawada dhakhtar qoro, inta ugu badan waxay ka timaaddaa noocyadan xanuunka joojiya. Maandooriyaha lama qaadan karo ilaalin caafimaad oo dhaw.
Sidee loo isticmaalaa xanuun baabi'iyeyaasha?
Waqtiga intiisa badan xanuun baabi'iyeyaasha waxaa loo baahan yahay maalmo kooban xaaladduna way fiicnaaneysaa ilaa qofku ka cabanayo xanuun daba dheeraada haddii ay dhacdo in muddadaas ay ka yara dheeraan karto. In kasta oo inta badan xanuun-baabiiyayaashan laga iibsan karo miiska dhakhtarka la taliyo waxaa habboon in lala tashado takhtar ama farmashiye ka hor inta aan la qaadin, gaar ahaan haddii qofku doonayo inuu ka qaado wixii ka dambeeya muddada 3 maalmood ah ee ku xusan.
Maxay yihiin dhibaatooyinka ka dhasha xanuun joojiyaha?
In kasta oo sida caadiga ah loo isticmaalo in lagu xakameeyo xanuunka nooc kasta ha ahaadee, xanuun baabi'iyeyaashu waxay la yimaadaan dhibaatooyin u gaar ah iyo falcelinno iyaga u gaar ah. Waqtiga intiisa badan, isticmaalka daba dheeraaday ee daroogada ama hagaajinta aan loo baahnayn waxay u horseedi kartaa waxyeeladaan dhinaca ah iyo ku-tiirsanaanta kuwaas oo bilaaba inay saameyn ku yeeshaan caafimaadka isticmaalaha. Waxaa muhiim ah in la ogaado in la socoshada dabeecadda isticmaalka awoodda daroogadu ay sidoo kale ka dhalatay sida saameyntu noqoneyso - mid fudud ama mid dilaa ah. Fiiri qaar ka mid ah dhibaatooyinka soo raaca ee xanuun joojiye oo daba dheeraaday:
• Dhibaatooyinka caloosha - Dhibaatooyinka caloosha iyo dheef-shiid kiimikaadka ayaa ah dhibaatooyinka ugu badan ee ay keenaan xanuun-baabiyeyaasha. Kuwaani waxaa lagu muujin karaa qaab shuban, caloosha ama calool xanuun. Kuwaas oo ay weheliso isticmaaluhu wuxuu sidoo kale la kulmi karaa xaalado mararka qaarkood lallabbo iyo matag ay weheliyaan dhibaatooyinka kaadi mareenka.
• Dhibaatooyinka maqaarka - Muddo ayaa la qaataa, xanuun-joojiyayaashani waxay sidoo kale u horseedaan dhowr arrimood oo maqaarka ah sida finan, cuncun iyo finan. Dareenka dheeraadka ah ee maqaarku wuxuu noqon karaa natiijada tooska ah ee isticmaalka muddada dheer ee xanuunka dilaayaasha.
• Dhibaatooyinka neefsashada - Muddo dheer isticmaalida xanuun dileyaasha sidoo kale waxay horseedaa noocyo kaladuwan oo dhibaatooyin neefsashada ah sida cidhiidhiga iyo foosha laabta, kororka garaaca wadnaha iyo sidoo kale neefsashada oo adkaata.
• Aragtida liidata - Isticmaalidda xanuun baabi'iye sidoo kale waxay u horseedi kartaa dhibaatooyin xagga aragtida ah oo dhowr ah gaar ahaan haddii awoodda daroogadu ay horseedday marxalado saameyn ba'an. Kuwaas waxaa ka mid ah xaaladaha sida aragga oo xumaada iyo dareemidda khadadka caarada ee hareeraha aragtida.
• Xanuun iyo xanuun - In kasta oo loo isticmaalo in lagu daaweeyo noocyo kala duwan oo xanuun ah, isticmaalka muddada dheer ee xanuun baab'iyaha ayaa u horseedi kara xanuuno kale iyo xanuun jidhka ku dhaca sida qoorta iyo dhabar xanuun iyo xitaa madax xanuun daran.
• Cilladaha maskaxda - Awoodda daroogada iyo isticmaalkeeda dheer waxay sidoo kale horseedi kartaa cilado nafsi ah waxayna saameyn ku yeelan kartaa nolosha dadka isticmaala. Kuwaas waxaa ka mid noqon kara waxyeellooyin sida jahwareer iyo riyooyin, kacsanaan iyo raynrayn iyo sidoo kale riyooyin aan caadi ahayn oo aan caadi ahayn qaarkood.
Sidee loo iibsadaa xanuun joojiyaha khadka tooska ah?
Way fududahay in la dalbado daawooyinka xanuunka joojiya ee aad u baahan tahay si aad u ilaaliso qaab nololeed xanuun la'aan ah. Way fududahay oo dhib la'aan Uma baahnid warqad dhakhtar qoro si aad uga dalbatid xanuun joojiyahaan khadka tooska ah. Asturnaantaada gabi ahaanba waa la ilaaliyaa waxaadna dalban kartaa aragtidayada amniga ah. Qaybta ugu wanaagsan ee ku saabsan dalbashada daawooyinkaaga xanuun joojiyaha ee internetka waa inaysan jirin wax sugitaan ah. Waxaa loo diri karaa albaabkaaga hore maalmo gudahood. Marnaba ma jirin hab fudud oo naftaada looga nafiso xanuunkaaga maalin kasta.
Farmasigeenna khadka tooska ah waa mid xirfad leh oo aan rasmi ahayn waana sababta markii aad internetka uga iibsato xanuun baabi'iyaha aad u hubsan karto in asturnaantaadu ay muhiim noo tahay. Amarada oo dhan waa la soo dirayaa iyadoon sumadda farmashiyaha la haysan si amarrada oo dhan loo xafido. Khasab kuguma aha inaad farmashiistaha fool ka fool ula macaamisho ama aad wax ka iibsatid dad kale oo wax iibsanaya.
Waxaa jira dawooyin xanuun badan oo kala duwan oo laga kala xusho oo la go'aansado midka adiga kuu fiican iyo xanuunka aad leedahay. Daawooyinka kaladuwan waxay leeyihiin adeegsiyo kala duwan dhammaantoodna uma wada aha qof walba. Waa inaad qiimeysaa dhammaan xaaladaha ku habboon oo aad ka taxaddartaa inaad qaadato kuwa aan faragelin doonin xaalad kale oo horay u jirtay ama daawooyinka kale ee aad hadda qaadatid. Farmashiista khadka tooska ah ayaa kaa caawin kara inaad go'aansato doorashada ugu fiican adiga iyo in baahidaada xanuunka yareyn la daboolo.